Real Madrid oo bar-baro la dhaafi weyday Kooxda Getafe +Sawiro – Gool FM
Laporta oo si lama filaan ah uga hadlay xariga madaxweynihii hore Barcelona ee Josep Maria Bartomeu
Joan Laporta oo u magacaabay tababare reer Spain ah ee badel u noqon kara Ronald Koeman
Guardiola oo sheegay waxa uu u baahan yahay Aguero kaddib dib ugu soo laabashadiisa garoomada
Tababare Zidane oo si RASMI ah u shaaciyey liiska 21-ka ciyaaryahan ee Real Madrid uu kala qeyb galayo kulanka Real Sociedad
Mikel Arteta oo sharaxaad ka bixiyay guushii ay kooxdiisa Arsenal ka gaartay Leicester City
Miyey diyaar u noqon doonaan xiddigaha Alisson iyo Fabinho kulanka soo socda ee Chelsea? Tababare Klopp ayaa ka jawaabaya
Real Madrid oo bar-baro la dhaafi weyday Kooxda Getafe +Sawiro
Bashiir April 25, 2019
( Espain) 26 Abriil 2019 Kooxda Real Madrid ayaa bar-baro la dhaafi weyday kooxda Getafe kulan ciyaareed ka tirsanaa horyaalka Spain ee La Liga .
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ku soo idlaaday bar-baro gool la’aan xili labada koox ay soo bandhigeen ciyaar aad u hooseyso qeebtii koowaad.
Kooxda Getafe oo ku ciyaareysay garoonkeeda ayaa sameesay labo jaanis oo gool loo filan karay lkn kama aysan faa’ideysan in ay gool u badalaan fursadahaas.
Dhinaca kale Kooxda Real Madrid ayaa dhankeeda sameesay hal fursad oo gool loo filan karay balse uma suura galin in jaaniskaas ay ka faa’ideystaan, ugu dambeen kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ku soo idlaaday bar-baro gool la’aan ah.
Waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan, Madrid ayaa ku soo gashay dar dar xoogan qeebtii dambe ee ciyaarta balse uma suura galin in ay gool la yimadaan.
Dhinaca kale Kooxda Getafe ayaa dhankooda la yimid ciyaar weerar ku dhisan lkn fursado dhowr ah oo ay heleen qeebtii dambe ee ciyaarta kama aysan faa’ideysan in ay gool u badalaan.
Ugu dambeen kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Getafe iyo Real Madrid ayaa ku soo idlaaday bar-baro gool la’aan ah xili Madrid aya ku guda jirto bandhig aad u liita.
Shaxda rasmiga ah kulanka caawa kooxda Getafe iyo Real Madrid oo la shaaciyey
HORDHAC : Liverpool VS Huddersfield? Kaga bogo macluumaadka kulanka oo dhameestirin